Laba qodob oo ahaa nuxurka khudbadii Farmaajo – Benaadirtv.com
Laba qodob oo ahaa nuxurka khudbadii Farmaajo
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, oo maanta khudbad ka jeediyey fadhi aan caadi ahayn oo Golaha Shacabku ku yeeshay magaalada Muqdisho. maanta ka qabsoomay xarunta golaha.
Fadhigan aan caadiga ahayn ee golaha waxa fadhiyey 184 xildhibaan. Waa arintii uu hore u sheegay madaxweynuhu shirkii Dhuusamareeb ka dib, oo ahaa inuu golaha baarlamanka hor geyn doono arimihii ay ku heshiiyeen xukuumadda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada, isla markaana uu warbixin faahfaahsan ka siin doono golaha arimihii halkaa la iskula meel dhigay.
1. Heshiisyadii hore yaan la jebin
Madaxweyne Farmaajo waxa uu khudbaddaa uu golaha u jeediyey ku sheegay in kulankii Dhuusamareeb ay xukuumadiisu la tagtay aragti ah in shacabka Soomaaliya loo dhaweeyo hanaanka doorashada hal qof iyo hal cod ah arintaasna ay ku dheganayd. Isaga oo sheegayey in aanay haboobayn in heshiisyadii hore loo gaadhay ee ahaa in dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah, ee 2018 Baydhabo ay ku gaadheen madaxda federaalka iyo kuwa gobolladu in hal bacaad lagu lisay laga dhigo.
Waxa uu sidoo kale carrabka ku dhuftay in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay iyaguna ku adkaysanayeen in doorashada lagu qabto hanaankii dadbanaa ee 2016 lagu galay oo kale.
“In kasta oo dooduhu kala fogaayeen, dawlad goboleedyada qaar ay aaminsanaayeen ayna aad ugu dhegeen in doorashada hada dhacaysa uu noqdo kii 2016 ahaa oo dadbanaa anaguna aan la tagnay meesha aana ku adkaysanay in doorasho loo baahanyahay in ay ahaato doorashadii sharciga laga sameeyey horena loogu heshiiyey in la meel mariyo oo heshiiskii shalay la galay aan la jabin” ayuu yidhi.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiskaa Baydhabo ee 2018 beesha caalamku aad u soo dhaweysay oo lagu bogaadiyey shirkii lagu qabtay Belgium, isaga oo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la ixtiraamo heshiisyada la gaadho.
2. Wixii Dhuusamareeb ka soo baxa baarlamankaa go’aan ka gaadhi doona
Madaxweyne Farmaajo wuxuu xubnihii madasha fadhiyey oo u riyaaqay hadalkiisa aadna ugu sacbinayey u sheegay in golohoodu wakiil ka yahay shacabka iyo maamul goboleedyada labadaba, sidaa awgeedna ay ogaadaan in ay ma huraan tahay in go’aankooda dalka oo dhan laga aqbalo . Arintaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay sida caalamku u shaqeeyo.
Madaxweynuhu wuxuu u sheegay golaha in heshiis kasta oo ay xukuumadiisa iyo maamul goboleedyadu ku gaadhaan magaalada Dhuusamareeb uu dib ugu soo celin doono iyaga oo uu horkeeni doono si ay uga qaataan kaalintooda dastuuriga ah.
“Sidaad la socotaan maanta oo bisha shan iyo toban ah waxaa lagu balansanyahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Dhuusamareeb si Dawladda Federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay uga arinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo. Taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaaya geedi socodka dimuqraadiyadeena ee dalka iyo in awooda loo celiyo shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hogaanka dalka. Madaxweynaha masuuliyadiisa ugu horaysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan, waa isagoo weli ka shaqaynaaya siyaasada laakiin mar walba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo. Waxaan mar kale idiin caddaynaayaa bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan barano golahaani wuxuu wakiil u yahay dawlad goboleedyada wuxuu wakiil u ahay shacabka Soomaaliyeed go’aankaa gaartaana waaa in dalkoo dhan laga aqbalo, waa sida caalamku ku shaqeeyo waxaan idiin cadaynayaa in aan halkan ku soo celin doono heshii walba oo aan la gaarno madaxda dawlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadataan haduu Ilaahay yiraahdo.”
15th Aug 2020 15th Aug 2020 Editor
Previous Previous post: Super Power Competition For Resources in Somalia Heats up
Next Next post: Somalia’s Army Told Her to Sew a Skirt. Now She’s One of Its Top Officers.